Awa ole n’izu ka m kwesiri ịgba n’igwe maka ọzụzụ? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Atụmatụ ọzụzụ ịgba ịnyịnya ịgba ọgbụgba - ajụjụ na azịza depụtara
Awa ole n’izu ka m kwesiri ịgba n’igwe maka ọzụzụ?
N'ihi nandị na-agba ígwèna-agbakarị 20-30awa n’izu. Ndị na-agba ịnyịnyaọzụzụn'ihi na ihe omume nke ultramarathon nwere ike ịbanye karịa. Ndị na-agba ọsọ ntụrụndụ (ụdị 3, 4, 5 na nna ukwu) na-etinyekarị ihe dị ka 10 kwa izuawa, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-enweta na 5 ma ọ bụ 7 mmaawaọ bụrụ na mmemme ha dị mkpụmkpụ.
Yabụ kedu uru nke a na-eme? (egwu dị egwu) Ọ dị mma, iji mee nke ahụ, anyị kwesịrị ilele kalenda ọsọ ọsọ. Professionalsfọdụ ndị ọkachamara na-agba ịnyịnya njem atọ a niile dị 60 ruo ụbọchị 90 n’afọ. Uru ndị ọzọ nwere ike ịgba obere obere, ụbọchị iri anọ ruo ụbọchị iri asaa, nke gụnyere ọkachasị otu ụbọchị ochie ma ọ bụ obere agba anọ ruo ụbọchị iri na asatọ n’agba ọsọ.
Ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ga-asọ mpi maka ebe dị larịị, nke na-adịchaghị ugwu, ebe imirikiti n'ime ha ga-asọ mpi n'ugwu ndị jupụtara na ugwu. Iji zaa ajụjụ a, gịnị ka ndị ọkachamara n’ezie na-eme? Ọ dịghị mfe. Ha na eme ihe nile di iche iche.
Agbanyeghị, ha nwere otu ihe: oge. Ọtụtụ ihe omume ịgba ịnyịnya ígwè na-ewe awa anọ ma ọ bụ isii ma ọ bụ 180 ruo 260 kilomita. Onye ọkachamara ga-azụrịrị maka ezigbo ntachi obi n'ọtụtụ ala.
Driversfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala maara nke ọma n'ịgba ọfụma ma chọọ itinyekwu nlebara anya na ya n'ọzụzụ ha ebe ndị ọzọ dị mma na cl. ga-adị njọ ma ya mere ọ dị mkpa ilekwasị anya na ya. Fọdụ ọrụ ịkwọ ụgbọala ga-arụ ọrụ maka otu ahụ ma ha agaghị agba ọsọ maka mmeri n'onwe ha.
Yabụ, ọzụzụ gị ga-emezu ihe achọrọ na mkpa nke a gụnyere. (soft jazz) Ego ole ka uru ndị a ga-azụ? Ọfọn, nke ahụ dabere na oge ha nọ n'oge oge. Ọ bụ ezie na agbụrụ adịghị agụ dị ka ọzụzụ, ha nwere mmetụta ọzụzụ na ahụ, yabụ ọ nwere ike ịbụ n'oge kachasị elu Ọkachamara nwere ike ọ gaghị adị mkpa itinyekwu ọzụzụ ọzọ na-elekwasị anya na mgbake ma ọlị.
Ihe ọghọm nke nke a, n'ezie, bụ na n'oge ụfọdụ ị ga-etinye oge awa na igwe kwụ otu ebe Lee izu izu azụ nke 30 ruo 40 awa na ọzụzụ igwe kwụ otu ebe n'oge oge niile ahụ. Ma ọ bụ n'etiti ọgba ọsọ ma ọ bụ n'oge oge oyi. Ichetara ọnwa Monster nke Chris Reams na Strava? Ebee ka o kpuchiri ihe dị ka elekere 140 na kilomita 4,400? Nke a bụ ọnwa anụ, site na onye ọ bụla, ọ na-egosipụta nnukwu ibu ọrụ nke ọkwọ ụgbọ ala ọkachamara ịlanarị oge ịgba ọsọ na ọkwa kachasị elu. (soft jazz) Yabụ kedu ka uru ndị a ga-eji zụọ azụ ma ọlị? O doro anya na ị ga-enwe ike ịnọdụ ala ma zuru ike? ha nwere nnukwu nkà.
Ikekwe m na-ekwu na ọ na-arụsi ọrụ ike ma nwee obi ike. Enweghị m obi abụọ na onyinye ahụ, mana ọ nweghị ụzọ isi ruo ogo dị elu na-enweghị ịrụsi ọrụ ike n'oge ụfọdụ. Ofbọchị ọzụzụ na-esochi na-enyere aka imeziwanye arụmọrụ.
Ha na-emeziwanye oge mgbake na iguzogide ike ọgwụgwụ. Oge ndị dị na mgbatị ndị a ga-enyere aka iwulite ike na ahụike aerobic chọrọ iji mee ka igwe kwụ otu ebe na-agagharị na oke ike a, oge gafere ga-enyekwa aka iguzogide ike ọgwụgwụ akwara na igwe kwụụrụ ahụ iji zụlite ndị ọkachamara? Ọfọn, ọ bụ n'ime ya ka ịma mma nke egwuregwu a. N'ime oge dị mma na oge ụfọdụ n'afọ, ọkachamara nwere ike ịzụ ihe ọ bụla.
Iji maa atụ n’elu ugwu. A ga-enwe oge n’afọ ọ bụla ọkachamara ga-aga otu ebe zụọ azụ. Ma eleghị anya, ọ ga-abụ ogige ma ọ bụ elu ugwu ma ọ bụ a recon nke ndị Belgium ochie.
Ma eleghị anya, ị ga-achọ ụzọ dị larịị maka ọzụzụ ịgba ọsọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-arị ugwu, ị ga-aga ugwu iji kpachara anya maka ịrị elu, oge gafere ikike ndọda, mana na ọkachamara niile nwere ike ịbelata obere mgbanwe mgbe a bịara n'ịhọrọ ebe imega ahu; Otú ọ dị, ị ga-ahụ na a ọkachamara bụ fọrọ nke nta ka mgbe ekwe omume mgbe ejegharị ejegharị na-ekpo ọkụ, kpọrọ nkụ ihu igwe, n'ihi na onye chọrọ n'ezie ka mmiri na oyi na-atụ mgbe ha na-adịghị n'ezie nwere. (Jazz dị nro) Otu ihe doro anya, igwe ndị a na-agba igwe ọtụtụ, mana ha na-eme ihe ọzọ? Ọ dabere. Driversfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala ga-a swearụ iyi site na itinyekwu ike na nhazi oge na mgbatị ahụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ egwuregwu.
Nke a doro anya na ọ na-ewu ewu mgbe ị na-alọghachi na mmerụ ahụ ma ọ bụ ọbụna na-anwa igbochi mmerụ ahụ ma wuo akwara. Ndị ọzọ nwere ike ịhọrọ ịkpa ike karịa site na ịlele mmiri, ịgba ọsọ, ma ọ bụ ịgba ọsọ mba. O siri ike ịchọta pro nke na-enweghị ma ọ dịkarịa ala otu ụzọ mgbapụ ọzọ maka nrụzi ahụike ha, mana ọ fọrọ nke nta ka etinye ya na usoro ahaziri nke ọma. (soft jazz) (na-asụ ude na mgbu) Uru ndị a na-enye ọzụzụ n'ụzọ doro anya ogologo oge, siri ike, mana nke ahụ ọ pụtara na anyị kwesịrị? Echeghị m otu ahụ.
Ọ gwụla ma ị na-eme atụmatụ ịgba ọsọ ụbọchị egwuregwu asaa ma ọ bụ ihe yiri ya, ọ nwere ike ọ gaghị aba uru ọzụzụ dị ka pro - kama, were ụkpụrụ anyị metụrụ ebe a taa ma tinye ha na ịgba ịnyịnya gị. Nke a na-enye gị ezigbo nlezianya echebara echiche, usoro ọzụzụ ahaziri ahazi yana uru ya. Isiokwu a emeela ka ị ghọtakwuo ihe mere ndị ọkachamara ji azụ ụzọ ha.
Maka mmejọ egwuregwu isii iji zere, pịa ebe a, mana nye anyị mkpịsị aka mbụ.
Kedu otu onye na-amalite ọzụzụ ga-esi agba ịnyịnya ígwè?
Atụmatụ Ọzụzụ linggba ỌgbamakaNdị mbido
Izu abụọ mbụ n’uche gbasara ịda mbaịgba ígwè, Ya mere, bido site na iji nkeji iri na abuo mee njem nke mbu na nke mbu.
Tinyegharịa Izu 1.
Gagharịa maka nkeji iri na ise rue iri abuo n’ime ubochi mbu nke enyere gi.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibido igwe kwụ otu ebe ma nwee ọrụ nka ole na ole ị ga-achọ ikpuchi. - Taa, anyị ga - arapara n’ihe ndị bụ isi, yabụ ọ bụrụ na ị bidoro ịgba ịnyịnya ígwè na nke mbụ ya bụ mgbe ahụ ihe a bụ maka gị. (Joy music) Ka anyị malite ozugbo na mbido.
Drivegbọala na oge mbụ. Anyị ga-eche na igwe kwụ otu ebe ga-aha nha gị ma ihe niile dị n'usoro. Mgbe ahụ ị ga-achọ itinye igwe kwụ otu ebe gị dị sentimita iri abụọ na abụọ site n'akụkụ ụzọ ahụ.
Jiri amamihe dozie cranks gị. Anyị na-akwado ọnọdụ elekere atọ maka Iwu kachasị amasị gị. Dị nnọọ ka nke ahụ, jidezie aka na sadulu ahụ, dabere igwe kwụ otu ebe na gị, wepụ aka gị na sadulu ahụ ma gbanye ụkwụ gị n'ihu.
Ugbu a jidere breeki abụọ, mee ka ịdị arọ gị karịa igwe kwụ otu ebe, tinye ụkwụ gị kacha mma na pedal na-aga n'ihu, gbanwee azụ gị na sadulu, lelee ubu gị iji lelee okporo ụzọ ahụ, ma ị ga-aga. Ya mere pịa na akara ihu gị m. Nọgide na-enwe ahụ iru ala karịa igwe kwụ otu ebe. (egwu obi ụtọ) - Ugbu a anyị apụla ma ọ bụ na ọ nwere ike bụrụ oge dị mma iji bido chee etu anyị ga-esi kwụsị.
A na-eji usoro a eme ihe mgbe ị na-eme ka ọrịrị dị mkpirikpi ma ọ bụ na-agbatị ọsọ ọsọ na ịrị elu dị elu. Anyị nwere ike itinye ikike na-adịghị mma na pedals na pedals karịa mgbe anyị nọ ọdụ. Nke a bụkarịrị n'ihi ike ndọda.
Iguzo ọtọ nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji belata mmetụta nke okporo ụzọ na-adịghị mma ma mee ka ịnyịnya gị nwee ntụsara ahụ. N'oge ụfọdụ, ọ nwedịrị ike inye gị ikike ịchịkwa. (egwu obi ụtọ) Dịka ọ bụla na nka izizi, anyị na-akwado ka ị chọta ebe dị jụụ na mpụga okporo ụzọ. - Ndị a bụ ezigbo ezigbo nkà iji bido ịmalite ma ha dịkwa mma ijikwa. - Ọ bụrụ n ’ọ masịrị gị n’isiokwu a ma chọpụta na ọ bara uru, nye anyị nnukwu isi mkpịsị aka aka na maka isiokwu ndị ọzọ pịa ebe a n’okpuru.
ọkacha mmasị tour de France
Kedu mgbe ị kwesịrị ịmalite ọzụzụ?
I nwere ike ibidoisi ọzụzụn'oge ọ bụla nwere ogo ọ bụla. Site n'ikwu nke ahụ, ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaru ọsọ na-abịanụ, ị ga-achọ ịhazi nke gịisi ọzụzụtupu oge na--eme kaJide n'aka na ị ga-eme ihe niile n'oge iji rịa elu maka mmemme gị.Mkpebi 22 2020
Ná mmalite nke oge ọzụzụ ọ bụla, ma ị bụ onye na-agba ọsọ oge ma ọ bụ na-amalite, echiche kachasị mkpa ị ga-atụle bụ oge ọzụzụ gị na-agba ọsọ, ọ bụkwa oge nke ga-akpali gị site na oge mgbake. ma ọ bụ oge ịnọ ọdụ ebe ị na-agbaghị ọsọ nke ukwuu, ruo n'ókè nke ịkwado ahụ gị iji mesoo mgbatị ahụ a kapịrị ọnụ ịrụ, yabụ ọ fọrọ nke nta ka enwere ike ịkpọ mgbatị ahụ maka mgbatị ahụ na uh isi akụrụngwa nke isi ọzụzụ bụ imubanye dị ka o kwere mee, mana ka ga-agbake.
Ya mere usoro iwu nke isi na ọzụzụ bụ isi abụghị ịgbakwunye ihe karịrị pasent iri ma ọ bụ iri na ise na olu gị kwa izu. Ihe dị mma gbasara usoro ịgba ọsọ na ije bụ na mgbe ụfọdụ ị nwere ike ị gafere ọnụ ọgụgụ ndị a, ị nwere ike imeziwanye ihe agbara gị site na ma eleghị anya 2025 pasent kwa izu. Ekwela ka iwe gị gafee otu izu.
Can nwere ike ịlele ihe karịrị ụbọchị iri ma ọ bụ izu abụọ na nke a maara dị ka ịgbanwe okirikiri ị na-efu iji gbanwee ụdị egwuregwu ị bụ. Ma BaseRunning bụ ihu ọma a dị mfe na-agba ọsọ, mmepe na-agba ọsọ, na ihe kacha mkpa icheta mgbe ị na-eme BaseRunning a bụ mgbake a. Yabụ ị gbalịa ịgba ọsọ oge niile i nwere ike mana ka ị gbakee ma gbalịa ịgba ọsọ dị ka ị nwere ike.
Ọchịchị dị mma bụ ịma nke a ma ọ bụrụ na ị na-achọ imeziwanye ụdị ọsọ gị. A ga-agba ọsọ karịa oge. N'aka ozo, oge a na abawanye, mana oburu na ichoro ike ma nwaa iwulite otu n'ime otu ogologo oge nke ndị ahụ na-agba ọsọ, gbalịa ịzụlite uh nke nta nke nta.
N'ihe banyere isi na-agba ọsọ, ọ dị mkpa icheta, uh mee ka obi gị daa, yabụ mee ka ọnụọgụ obi ahụ dị n'etiti 70 n'okpuru 70 pasent nke gị obi gị, na elu debe nkpu obi gị .. jiri naanị obi izu ike gị dị ka ihe mgbede maka akụkụ ahụ, na okwu ndị ọzọ ị na-ewere oke obi gị, gbaa mbọ hụ na ị na-ewere oke obi gị.
Know mara, nke ị hụrụ na mgbatị siri ike na oge dị nso mgbatị ahụ gị, mgbe ahụ ị ga-ewepụ ọnụego izu ike gị, nke bụ ọnụego obi ị na-eburu ihe mbụ n'ụtụtụ mgbe ị dị mma ma nwee ahụ iru ala mana ị na-amụ anya ọnụọgụ ọnụọgụgụ obi kachasị max wee gbasaa nke ahụ site na isi asaa efu wee tinye obi gị zuru ike na azụ, yabụ nha anya na-ele ihe dị ka nke a, ọ bụ oke obi gị na-ewelata obi izu ike gị na mgbe ahụ agbanwee obi izu ike gị n'ikpeazụ ma nke ahụ na-enye gị oke elu dị mma maka obi gị iji rụọ ọrụ, uh iji nwee ike ịme mgbatị a dị mfe, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnọghị ọsọ ọsọ gị nwedịrị ike ịgụta ah elu na-amalite na ihe ize ndụ ije na 15 16 iri isii nkeji kwa kilomita bụ a n'ezie dị nnọọ goo d way to n'ihu mee ka ntọala gị bawanye.
Na-agba ọsọ mmepe Isi na-agba ọsọ kwesịrị iji oge dịkarịa ala izu 4. Ma ị maara? Ebe n'etiti 6 na 12 isi ọsọ ga-enye gị ezigbo ntọala maka ọzụzụ ọzụzụ gị kacha elu. Rịba ama otú ahụ gị si agbake.
Ikpere ikpere gị, nkwonkwo ụkwụ gị na n'oge na - adịghị anya ma n'ụzọ ahụ ị ga - enwe ike jiri nlezianya mee ka olu gị dị elu ndị na - agba ọsọ marathon na-agba ihe dịka 90 ruo 120 kilomita kwa izu na ah ọtụtụ mmadụ na - achọpụta nke ahụ, uh . .. ha maxed si, na-amalite na na na ọ bụ gị aka iji na-erughị, ozugbo ị na-gburugburu 60 ka 80 kilomita a izu ọ bụ ezigbo ike Iji na-agba ọsọ 80 kilomita a izu, na mma nke ukwuu ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgba ọsọ 60 kilomita n’izu ma ọ bụ karịa.
Eleghị anya ị chọrọ ịgba ọsọ 2 otu ụbọchị n'izu. Ya mere, ọtụtụ ndị na-agba m ga-agba ọsọ ọsọ ọsọ na Mọnde, ma eleghị anya, agba ọsọ abụọ na Tuesday, obere ọsọ na Wednesday, abụọ na-agba ọsọ na Thursday. Mgbe ahụ, anyị na-eme ụbọchị izu ike na Fraịde, rụọ ọrụ dị mma n'ụtụtụ Satọdee wee jiri chi a usoro dị n'etiti n'ehihie Satọde wee bụrụ ogologo oge ahụ na Sọnde nke nwere ike ịbụ ụzọ ịhazi otu izu wee ghee ya Naanị gbanye ya ma ị ga-ahụ ozugbo ịmalite ịgbakwunye ọrụ dị mma, ọ naghị adị mfe ịmebe ọkwa olu ya mere kpachara anya mgbe gị na ya na-emekọrịta ihe.
Ingnya ịnyịnya nwere ike ịnwe ụdị n'ụdị na nha niile, mana ọ bụrụ na agbanyeghị gị oge maka oge, ịnwere ike ịnwe njem kwesịrị ekwesị na nkeji 30. Anyị chere na anyị ga-anwale ma hụ ma anyị ga - enweta ezigbo njem naanị ọkara awa, were nyocha na ngwa gcn nke ị na - ahọrọ. Ebe ọ bụ na ọnọdụ abụghị otu maka onye ọ bụla, anyị ga-egosi gị ụfọdụ ezigbo ndụ ihe atụ nke ihe anyị dịka gcm moderators na-eme mgbe anyị nwere naanị 30 nkeji iji mee itapenlets gocycling akpụkpọ ụkwụ 30 nkeji nke na-adịchaghị ogologo iji gbagoro ụzọ.
Echere m na ọ ga-ewe m nkeji 30 ka m wee si n'ọnụ ụzọ m jiri ihe m na-aga na Mypike, nke ahụ ga-abụ ihe na-enweghị isi maka m ezigbo nnọkọ na nkeji 30 na turbo na-agbanwe ma na-asa ahụ mgbe obere oge na-ekpo ọkụ 2040s na Aga m eme nke a oge ọ bụla enwere ike iji obi ụtọ na obi jụụ yabụ echere m na m nwere ike ịme 10-15 maka m ga - eme ka a hazie ya ka m wee gaa njikere ịkwadebe ngwa m na nke m bike dị njikere dịkwa mma, echere m na nke a bụ ihe kachasị ọsọ m megharịrị obere oge karịa nkeji abụọ gara aga na oge a na-arụ ọrụ n'ime ụgbọala m malitere m wahoo ọfụma yabụ m nọ n'ụgbọ ịnyịnya ígwè were obere oge m na-atụ anya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji anọ, mana M na-eme mkpesa na m ga-agbanyeriri onye ofufe ahụ n'ihi na ọ dị m ka ọ na-ekpo ọkụ, n'ihi ya, m ga-echebara nke ahụ echiche, ọ dị mma, ya mere ugbu a, m bụ nkeji anọ na 30 sekọnd n'ime ọkụ m, M chere echiche 20 sekọnd tupu m amalite mgbalị mbụ m, ọ dị mma, ugbu a ọ bụ oge m, ọ na-adị m obere nrụgide m na-ekwu na m h enwebeghị ezigbo mma ọkụ m enweela ezigbo minit 10-15 mana mana echere m na anyị ga-abanye n'ime akụ mbụ ndị a, m ga-ewere ha na mbụ ntakịrị ntakịrị ma anyị banye n'ime ha ka m nwee anọ sekọnd ka m ga - esi pụọ ọtụtụ oge anaghị m ama otu oge, kedu ụbọchị n'izu ọ bụ, yabụ nye m nkeji iri atọ ma ịmara na ọ ga - abụ oriri mebiri emebi ma ọ bụrụ na ọ jụrụ oyi ma anaghị m achọ anọ n'èzí Anọ m ebe ahụ ogologo oge ma ọ bụ na m nwere atụmatụ ịme na ezinụlọ. Amaara m na m ga-eme ya ngwa ngwa ka m wee na-eme ka okporo ụzọ m banye na mpaghara ahụ, gbanwee, anyị ga-akụ ya, anyị ga-eti ihe mgbaru ọsọ ozugbo m si n'ọnụ ụzọ pụta, enweghị ọgbaghara Ihe dị ka abụọ atọ nkeji iji fụọ ụdọ ụkwụ m ka m kpoo ọkụ, nwee ntụsara ahụ na igwe kwụ otu ebe ma were obi m nwee ike ịga 120 ruo 140 maka nkeji ise iji mee ka m na-agagharị ka m wee kwadebe maka mgbatị ahụ m nwere ike ime nke ahụ n'otu ntabi anya, ya mere, anyị nwere atọ nkeji, ini enwe n'apata ngụ oge dị na-ebili. Maka nkeji ise sochirinụ Achọrọ m ịnọgide na-enwe ọmarịcha, dị elu, achọghị m ịkpalite ahụ ike nke ukwuu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnweghị oge buru ibu, ị chọghị ilekwasị anya n'ịmụta Biggear iji nweta obi ọnụego dị elu ịchọrọ naanị otu obi igwe na-agba ọsọ ka ọrụ gị dị elu na sistemụ obi anaghị emetụta nrụgide ahụ dum nke na-abịa mgbe obere oge gachara na nkeji 30 ọ ga-esi ike, mana echere m na ọ enwere ike ime ya ma achọrọ m iji nke a dị ka ohere ịnweta ọmarịcha ịnyịnya ígwè, gbasaa ụkwụ m, mee ngụgụ m, bụrụ otu na okike, oge udo n'etiti etiti ụbọchị ikekwe ọ ga-agwụ ike ee ee ụbọchị m bụ nrụgide, ha ka mma, gbanwee uwe gị.
Jidesie ike, ịnọghị ebe a, lepụ anya maka ihe mkpuchi nke okpu nzuzo nke abụọ, adịla m njikere, apụla m, apụla m n'ọnụ ụzọ, ana m apụ n'èzí oh na-adị m mma pụọ ugbu a, o were m nkeji abụọ iji kwado maka na m bechapụrụ ihe niile ahụ na-atọ ụtọ n'ọnụ ụzọ ịnyịnya ígwè m kwere ka m jiri 13 nkeji oge ịkwọ ụgbọala nke m ga-eme n'otu ụzọ n'okporo ụzọ m, m wee mee nke a n'ihi na achọghị m ịhọrọ akaghị aka nwere ike ịdị ogologo karịa ka ọ nwere ike ịdị na akwụkwọ, yana n'ihi na ọ pụtara na amaara m na m ga-atụgharị ma laghachi azụ ka m wee nwee ike ịlaghachi n'oge, yabụ ọ bụrụ na m mee 30 Nkeji? na otu uzo 13 nkeji azụ nke ahụ bụ 26 nkeji oge njem ka m wee nwee nkeji abụọ ahụ iji kwadebe, nye m nkeji abụọ ọzọ ịgbanwe mgbe emesịrị n'ihi na enwere m nzukọ dị mkpa mgbe nke ahụ gasịrị, yabụ m ga-ahụrịrị na m nwetara laa azụ n'oge ka onye ọ bụla ga-enwe ike ịnwe ọkaibe kachasị elu na nkeji 2026 nkeji oge ịkwọ ụgbọala m gbanarịrị ọkara elekere m gbapụrụ akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe mana echeghị m eche na m ga-ewere otu egwu banyere ide banyere ya nwee mmiri mgbochi mmiri mgbochi mmiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na ọ chọrọ ka m bụrụ abụ maka bluesnow m na-arụ ọrụ nkeji iri atọ, m ga-apụ n'èzí wee gbagoo n'ugwu ole na ole n'ịsa ebe m bi n'ihi na ha dị ezigbo nso yabụ enwere m olileanya na m nwere ike ịme ihe Nkeji 10 nke vo2 max mgbatị na windo a, kedu ihe m ga-eme? n'ihi na ọ na-ewe m 10 nkeji iji kwadebe, yabụ enwere m naanị nkeji 20 ka m rịgoro inutes, nkezi bụ 10, o siri ike, mana echere m na m nwere ike ịme nnabata abụọ dị mma ebe a, ihe dịka 380 400 watts wee bụrụ ihe dị ka nkeji 10 n'ụdị okwu a nke vo2 max a na-ekwu okwu ya bụ na m nọ na turbo 19 na ọkara nkeji ugbu a, m kwụsịrị ịgụta mbọ 20 m gbalịsiri ike ma m bidoro na-eteta, m swearụọ iyi, obi m na-arị elu, yabụ enwere m ezigbo mgbatị ahụ echere m Enwere m ike karịa na nke ahụ ga-apụta nkeji ise ọzọ oh mba m ga-ajụkwa oyi ee ise ọzọ wee nkeji abụọ nke cooldown n'ezie gbanye ụkwụ m wee hụ ma m ga - agagharị naanị nkeji atọ nke ga - abụ naanị ihe niile dịkwa mma ka anyị mee obere mbọ m nwere ike ịchọrọ ugbu a, mana m na-aga n'okporo ụzọ maka ọfụma, dị mfe nkeji iri, Enweela m onwe m ebe a na nke abụọ, na-eme nzaghachi m nke abụọ na elekere na-agba ọsọ ihe dị ka nkeji 26 nke pụtara na enwere m nkeji anọ iji laa ma gbanwee, nke ahụ bụ nzuzu idea oh godoh, a kara m mma jiggle this much maka oyi downokay ya mere agaghim ano na njem m nke nkeji asaa mana echere m na m ghabitugo n'ihi na achoputara m nkpuru osisi di nma. Echere m na m na-abịakarị ebe a n'oge mgbụsị akwụkwọ iji were ha ka ha bụrụ mmalite nke oge iji mee ihe n'eziokwu na achọpụtara m ebe a ka m kwụsị ma hụ m ga-anwale ha ezigbo kemmiri ihe mana ntakịrị ihe na-ewute ya. ọ bụrụ na ị gaara anọtụ ntakịrị karịa izu abụọ, echere m na ọ dị mma ịmara agbanyeghị m gbawara nke ọma n'ihi na nke a na-eri obere oge dị oke ọnụ, enwere m ọchioma ịnwe nke a dị ka obere njem dị egwu n'oge ezumike nri ehihie m, ịgwa gị ugwu ahụ ọ bụ ugwu dị elu adịghị elelị ya ruo na etiti Myride na Carrick na uwe elu na ogologo na akwa n'elu osimiri ahụ ugbu a ma dịka ị nwere ike ịhụ ebe ọhụụ magburu onwe ya site na ebe a, osimiri ahụ toro oke m kwesịrị ikwu anyị nwere ọtụtụ mmiri ozuzo nke mere na ọ dị ka ọchịchịrị gbara ọkpụrụkpụ pụrụ iche nke na-acha uhie uhie nke obere ụgbọ mmiri nwere ntakịrị ihe ọghọm, echela na ọ ga-enweta ụgbọ mmiri na ọkara elekere oh enwere m ntakịrị ihe furu efu, ọ ka mma m ịlaghachi n'ihi na ọ dị mma, ụzọ gasị na-ekwu okwu n'ụzọ aghụghọ na ịkwụwa aka ọtọ, enwere m ntakịrị ntakịrị pụọ n'ihi na m nọ n'elu ugwu, ọ na-ewe m nkeji 30 iji rute ebe a ma ụzọ m ga-esi laghachi azụ, nke a adịghị na atụmatụ m, echebeghị m ya, echebeghị m ya ma m nwere m Ọ bụrụ na m ga-eme nzukọ a n'ihi na ọ bụ nzukọ dị mkpa, kwaga 30 nkeji mere ka ọ dị mma ka m gụchaa ahịrịokwu a Abụọ nkeji ụzọ ikpeazụ 30 sekọnd m ga-akụ ya ike ma m ga-ewere a abụọ nkeji ezumike ime 30 sekọnd niile outokay, otú ahụ na nke mbụ nkeji abụọ na-eme, ugbu a, m nwere nkeji abụọ free na m nwere ihu ọma dị na-aga na-ajụkwa, mgbe ahụ, m ga-eme ya ọzọ, ọzọ abụọ nkeji. Abịara m ebe a n'olulu aja dị na mpaghara a iji tinye ezigbo mgbalị ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma nwee ọ havingụ na-atọ m ụtọ n'ihi ya enwere m obi ụtọ na m ga-eji 30 nkeji ụbọchị m, ikekwe ka ọtụtụ n'ime gị na-apụ n'okporo ụzọ abughi obere ihe, ya mere, m ka nwere 60 sekọnd iji zuru ike, mgbe ahụ, m ga-eme abụọ ọzọ n'ime mgbalị nkeji abụọ a, mgbe ahụ, m ga-arụkwa ọrụ igwe kwụ otu ebe, nke ọma, ka anyị bido na nke abụọ, ka anyị gụọ nke abụọ, anyị nwere nkeji abụọ ọzọ, mgbe ahụ, m ga - eme nke ikpeazụ m nke ụzọ abụọ a Vo2 nke na enweghị m ihe ọ bụla iji cheta oge a chọrọ ngwa m akpụkpọ ụkwụ m igwe kwụ otu ebe ma echefuru m ka m nwee oghere atọ ọzọ. Enwere m ike ime ya karịa ịgbalịsi ike, mgbe ahụ enwere m ike ịkpọ ala, m ga-atụ aro mgbe ị na-ekpo ọkụ nke ọma ma na-akpọ oku ekwentị mgbe ọ bụla ị na-eme nnọkọ dị ka nke a, mana m chere na m nwetara ya, mana ọ bụghị m. 'gbadata na 27 nkeji ma achọpụtara m na nkeji abụọ nke oyi mgbe nnọkọ siri ike dị otú ahụ ezughị ezu, ụkwụ m ka na-agba ọkụ, Obi m ka na-ama mma ma ọ bụrụ na m pụọ n'ụkwụ m ugbu a, ụkwụ m ga-akpọ m asị echi, n'ihi ya, m ga-anọ na turbo maka oge ole na ole iji mee ka ọ dị jụụ nke ọma ka m wee ghara ' enweghị ihe mgbu m mechara, mana gịnị ka m chere, nkeji atọ iji pụọ wee saa ahụ? O wee pụta na atụghị m atụmatụ nke ọma na m ga-esi ike dịka m nwere ike ịlaghachi n'ụlọ megide Hillah Power na ya mere oge ndị ahụ agwụla, ugbu a ọ bụ oge ime ihe site na ọrụ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na m na-adọba igwe kwụ otu ebe ma ugbu a, m ga - ewepụta 20 sekọnd ọzọ ka m na - arụ ọrụ m ga - alaghachi ugbu a, m ga - aga n’ihu na mbọ a, ugbu a ọzọ, m na - arịa ọrịa, huhso maka ihe niile ahụ enwere m mpaghara m bi na - anaghị apụ apụ agabeghị ezi n'ụlọ, enwere m mbọ ikpeazụ m ga - eme, aga m eme nke a n'akụkụ ụzọ mgbe m na - alaghachi n'ụlọ m Ọ dị mma, ugbu a 20 sekọnd ziri ezi, agbalịrị m ịnwale ya na ịrịgo na m na-achọ ime ụlọ m ugbu a, m na-eche na m na ndị doro anya na m nwere 25 nkeji nke na-akwọ ụgbọala oge ya mere m nwere atọ nkeji iji n'ụlọ, nkeji abụọ, ka agbanwee, na mgbe ahụ bi m azụ na na-arụ ọrụ na ọkara otu awa ya mere ugbu a, m obi ike na m ga-ahụ ya na m oche otú m mere nnọọ nzukọ m na m nwere ike ọ bụghị mere ndị kasị The Epic njem, ma ị maara ihe ọ dịghị mkpa n'ihi na m ' m apụ Enwere m ikuku ọhụrụ na amachago m dị mma karịa ihe ọ bụla mgbe ụfọdụ na ndụ anyị anaghị eme ihe ọ bụla n'ihi na anyị enweghị ike ịme ihe niile anyị ga - eme karịa ịme obere ihe ma ị maara, oge ụfọdụ ị ga - eme dị mfe ịpụ ebe ahụ, ịgbagọ ụkwụ gị ma nwaa ya na nke ahụ bụ ikike anwansi ya mere m ga - alaghachi wee wuo ya niile n'ime m, yabụ m ga - alaghachi n'oche m n'ihe dị ka nkeji ole na ole. mara na emeworị m nkeji atọ m kpoo ọkụ, emere m obere ụzọ m dị mfe, emere m nkeji abụọ na nkeji abụọ site na igwe kwụ otu ebe ma jiri ọsọ na-agba ọsọ ugbu a, m ga-abụ ic h do a last sprint to finish this last otu nke mere na ọ bụ ya 3 0 nkeji m dị ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịwụpụ ebe ahụ, ọ ga - adị gị mma karịa ị ga - enweta ọbara na - aga n'ụbụrụ gị ị ga - eche nke ọma ị ga - enwe mmetụta ị nwere ihe ọ bụla obere dị mma karịa ihe ọ bụla bụ ihe ọ bụla a na-ekwu mgbe niile nwee anụrị, jide n'aka, daalụ maka ile ha niile anya.
Echere na ị nwere mmasị na nke a ma enwere m olileanya na ọ ga - eme ka mmụọ nsọ gị banye n'ụgbọ ịnyịnya ígwè gị ma nwee obi ụtọ obere njem ndị a, mana biko mee ka anyị mara na nkọwa dị n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ọkacha mmasị maka obere ụta ị ga - enwe ọ wouldụ eme ma ọ bụ ọzụzụ ọkacha mmasị ma ọ bụ obere njem kachasị amasị m n'okporo ụzọ obodo dị ka m ga-achọ ịnụ n'ọnụ gị dịka anyị niile ma biko mee ka anyị mara na mpaghara ebe a dị n'okpuru ebe a ka anyị jiri nlezianya hụ gị n'oge na-adịghị anya, ekele maka ile mmadụ niile anya ma nwee anụrị na-agba ịnyịnya
Kedu ibu ị ga-atụfu ịnya igwe ọgbụgba 30 kwa ụbọchị?
Vardlọ Akwụkwọ Ahụike Harvard na-akọ banyere mmadụ 155-paụndnwere ikeọkụ ihe dị ka calorie 260 na-agba mgbatị ahụigwe kwụ otu ebemaka naanịNkeji 30. Onye dị otu narị na iri abụọ na isegagbaa calorie 210 n'otu mgbatị ahụ, ebe mmadụ 185-paụndgagbaa calorie 311.Eprel 27 2019
Ee,ịgba ígwènwere ike inyere akaida abụba abụba, ma ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ịkwalite n'ozuzuabụbaọnwụ na-akwalite ahụ ike. Ijibelatan'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-ihe omume aerobic, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.Bọchị 2 2021
Ogologo oge ole ka ọzụzụ ọzụzụ bụ isi?
A na-agba ọsọisibụ oge — nke a na-ewekarị izu isii na iri na abụọ — ma dịgasị dabere na ahụmịhe ị na-agba na ahụike gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ n’agba ọsọ, itinye ego na kilomita dị mfe na mbọ mkparịta ụka ga-ewulite ezigbo ikukuisisite na nke ị nwere ike ịmalite oge mbụọzụzụatụmatụ.June 10. 2015 g.
Ndi igwe n’eme ka oku gbaa oku? Eeh. Ọ bụ ezie na gịafọakwara anaghị arụ ọrụ dị ka quads gị ma ọ bụ mpịakọta gị mgbe ị na-agba ịnyịnya, manaịnyịnya ígwè siaerobic ọdịdị pụtara na ị na-ere ọkụabụba.bọchị 2020
Kama, were ajiri nwayọọ, ma ogologo njem otu ugboro n'izu, karịsịa n'oge mmalite. Ogologo njem (ruo awa isii)ọkụọtụtụ n'imeabụbama nye gị ezigbo ntachi obi maka oge a kara aka. Cheta, ọbụna 30 nkeji nkeịgba ígwè nwere ikeenyere gi akaidaibu, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-aga ike.Ọnwa Ise 25, 2021
Ogologo oge ole bụ usoro ọzụzụ ịgba ịnyịnya ígwè?
Atụmatụ ọzụzụ ntọala, nke mepụtara na mmekorita ya na Veloptima na InPursuit Coaching, bụ izu iri na abụọ n'ogologo ma na-enye oge 3-5 ime ụlọ kwa izu iji nyere gị aka iwulite ntọala ọzụzụ zuru oke.
Kedu akụkụ kachasị mma nke atụmatụ ọzụzụ ịgba ịnyịnya ígwè?
Ntọala nke usoro ọzụzụ ịgba ịnyịnya ígwè ọ bụla na-aga nke ọma na-eguzobe n'oge ntọala. More nwere ike ịdị mma karịa, ị nwere ike iwulite FTP gị. Mostzọ kachasị dị irè iji mee nke a maka ọtụtụ ndị na-agba ígwè bụ site na Sweet Spot Base.
Gini mere o ji dị mkpa na ịkụziri ndị ọzọ egwuregwu bọọlụ?
Ọzụzụ ntọala bụ akụkụ dị mkpa nke ọzụzụ nke onye ọ bụla na-agba ígwè n'ihi na ọ na-eme ka ntọala ntọala gị, ntachi obi, na ikike ikuku. A na-agwụkarị ọzụzụ ntọala n'ime usoro nke isi.